Mipendero yakareba pasi pasi 2014
Mheto iyi chikamu chinokosha chepfeke yevakadzi. Mumwaka mutsva, zvipfeko zvakasiyana-siyana zvejasi zvichave zviri mumafashoni, asi kunyatsotarisirwa kunofanira kubhadharwa kumapendero marefu muna 2014 muzasi. Pamusana pemhando dzakasiyana-siyana dzemutauro uyu, mufashoni wese anogona kugadzira mufananidzo wake wakasiyana-siyana achifunga nezvehutano hwemufananidzo wake. Uyu mupendero ane chinonhuwira, ane chiuno chakanyanyisa, chikoro uye retro, pamwe chete nemasikirwo akawedzerwa.
Mafashoni maitiro e2014 pamapendero ari pasi
Ichishandiso chejira refu ndeyekuti inogona kupfekedzwa zvakachengeteka zvepati uye yekufamba kwezuva nezuva. Chiitiko chichava chekare uye chetro style. Uyewo, izvi zvinyorwa zvakanaka kuti tishande muhofisi. Nokuda kwechifananidzo ichi, wedzera shangu nehesi dzakakwirira uye zvinhu zvakasimba.
Ruzivo rwemwaka mutsva yaiva fesheni yejasi muvhu nekunhuwa. Chipfeko chakadaro chakaita kuti iwe uzviparadzanise neboka revanhu, kusimbisa iwe pachako uye kutora. Usakanganwa pamusoro pejasi nechiuno chakanyanyisa. Izvo hazvingokupi iwe kukudzwa uye chic, asi zvakare kusimbisa chimiro chiduku.
Mipendero yakaisvonaka mukati megore 2014
Fesita yejasi refu inoparadza maonero ehupfumi hwemaxi urefu. Mumwaka mutsva, skirti iyi inobatanidza nekunaka, zvepabonde uye nyika yose. Kwemheto yakareba zviri nani kusarudza mashizha nemashizha marefu kana mabhesi. Uyewo akakodzera kumusoro uye T-shirts. Muchibatanidzwa ichi, unogona kufamba nekufamba zvakanaka kusvika kumhenderekedzo. Kana zviri zvemavara, zvino mu fashoni zvichave magedheni emagetsi, kusanganiswa kwezvinhu zvakasiyana-siyana uye maruva anoiswa mavara .
Uyewo pakati pezvishongo zvemafashoni muhafu yegore ra2014 chaiva chikwata chaidiwa chikafu. Muenzaniso weketi iyi ichava yekushongedza kwako pane chero chiitiko, kugadzira mufananidzo munyoro uye unodikanwa, uye chiedza chichiyerera machira chichasimbisa fragility yako uye kukudzwa.
Sezvaunogona kuona, fashoni yejasi muvhu ra2014 inofadza nehuwandu hwemavara uye mitambo, kuitira kuti musikana wese, akapfeka jira refu muvhu, akanzwa sehosi.
Outerwear - spring 2015
Akashandurwa swimwear 2014
Mifananidzo yevakadzikadzi Shirts
Zvipfeko zvevakadzi vakanaka
Mafashoni emashizha - autumn-winter 2015-2016
Vakadzi venguva refu vakadzika pasi 2015-2016
Zvishandiso zvemafashoni 2014
Magadzirirwo eHairstyles - Rhizha 2014
Misumari inoshamisa 2013
Mucheka wetsvuku nehangu 2016
Vakadzi vemaweledziro 2015
Mufananidzo weusina kurega Melania Trump yakashongedza mapeji eNew York Post
Ndeupi musiyano pakati pe rudo nerudo?
Nzira yekusarudza magirazi emasikati nenzira yechiso?
Pomeranian Pomeranian - zvinowedzera uye zvinopera zvezera
Caripazim - kurapwa kwekupisa
Frozen strawberries yechando
Kupfuura kushambidza bhuni rinokura?
Nzira yekuita mari kunze kwekubva kumba?
Mhemberero dzezhizha - dzimba dzakanakisa uye dzakashamwaridzana nekuda kwechando ichi
Nzira yekuwana sei vaginal orgasm?
Jeans 7/8 - Nezvokupfekedza uye sei kugadzira zvidhori zvemifananidzo?